El Cotopaxi, fitsangantsanganana mahafinaritra avy any Quito | Vaovao momba ny dia
Ilay volkano Cotopaxi, fitsangantsanganana mahafinaritra avy any Quito
Enric Gili | | Ekoatera, Quito
Matetika ny olona mandeha any Ekoatera dia manao izany mba hitsidika ireo Nosy Galapagos, ilay paradisa farany eto an-tany. Ny firenena Andes dia mbola kely fantatry ny fizahan-tany eoropeanina ary mahamenatra satria ny tanibe dia manana hatsarana miavaka ary manana zavatra betsaka hatolotra.
Androany dia manolotra aho fitsangantsanganana manomboka any Quito, fiakarana mankany Cotopaxi. Izy io dia traikefa izay tena amporisihiko raha mandeha any Ekoatera ianao. Tsy ho diso fanantenana ianao (raha avelan'ny hetsika volkano).
Ny ankamaroan'ny fitsangatsanganana, toy ilay tsipiriany etsy ambany, dia azo atao manomboka amin'ny Quito na Latacunga ary miverina amin'ny andro iray.
Ny volkano Cotopaxi (5897 masl) dia miakatra avo indrindra 50 km fotsiny ny renivohitra ary 35 avy any Latacunga. Io no volkano faharoa avo indrindra eto amin'ny firenena ary iray amin'ireo volkano mihetsika avo indrindra eto an-tany.
1 Ahoana ny fomba hidirana amin'ny volkano Cotopaxi?
2 Inona no tokony hatao ary inona no ho hita any Cotopaxi?
3 Midina sy mitrandraka amin'ny Mountain Bike!
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny volkano Cotopaxi?
Hitsidika sy hiditra ny Cotopaxi National Park Ilaina ny manakarama ny serivisy ho an'ny masoivoho matihanina. Tokony ho ao an-tsaina, ary tena zava-dehibe, fa ny Quito sy ny valan-javaboary dia miorina amin'ny haavo mihoatra ny 2500 metatra ary ny teboka farany ahatongavan'ireo fiara na van dia efa ho 4200 metatra. Ny aretina amin'ny haavon'ny toerana dia tokony hodinihina alohan'ny hanaovana ny fitsangatsanganana.
Tsy maintsy acclimatize isika andro vitsivitsy alohan'ny hiakarantsika, ny fankanesana any an-tanàna amin'ny haavon'ny ranomasina mankany Cotopaxi mivantana dia mety hanimba ny fahasalamana.
Manoro hevitra anao aho hitondra rano iray tavoahangy, akanjo an-tendrombohitra sy kiraro, fonon-tànana ary ambonin'izany rehetra izany: aza manao ezaka be loatra. Fiakarana mora nefa miadana, amin'ny haavo 4200 metatra dia mandeha miadana izy, aza mihazakazaka.
Hay safidy roa lehibe hahazoana izany:
Travel in fitateram-bahoaka na tsy miankina avy any Quito / Latacunga mankany amin'ny làlana fidirana mankamin'ny valan-javaboary amin'ny arabe Pan-American. Raha vantany vao tonga isika dia efa mahita fiara 4 × 4 maro izay azontsika atao ny mitsidika azy. Tokony ho maso ivoho manana zon'ny fidirana izy ireo. Azo antoka fa io no fomba mora indrindra (50 eo ho eo isaky ny olona) sy novolavolaina, fa mandany fotoana bebe kokoa. Ny teboka farany azo aleha raha tsy mila fahazoan-dàlana na torolàlana manokana dia ny Ivotoerana Mpitsidika Cotopaxi.
Manofa ny lalana avy any Quito / Latacunga. Manolotra van 4 × 4 miaraka amin'ireo mpamily sy mpitari-dalana ny masoivoho. Matetika ny fitsangatsanganana dia atao amin'ny andro iray ihany ary misy sakafo sy bisikileta hidina miaraka aminy ny volkano. Ny mpitari-dalana dia miandraikitra ny fanomezana famantarana lehibe 4, ny tantaran'ny volkano sy ny valan-javaboary misy azy. Tokony ho eo ny vidiny $ 75 ka hatramin'ny $ 90 isaky ny olona.
Manoro hevitra manokana ny fandraisana ny fitsidihan'i Quito aho. Mety lafo kokoa izany, fa ny miala amin'ny 8 maraina amin'ny 11 eo ho eo dia ho hitanao eo afovoan'ny valan-javaboary. Amin'ny fotoana fisakafoanana dia hiverina eto an-tanàna ianao. Etsy ankilany, ny fidinan'ny Mountain Bike amin'ny alàlan'ny volkano dia 100% no tondroina.
Ny fiakarana amin'ny tampony dia mitaky farafahakeliny 2 andro, ny fiakarana mankany amin'ny fiandohan'ny glacier dia azo atao amin'ny andro iray ihany.
Inona no tokony hatao ary inona no ho hita any Cotopaxi?
Raha mamela azy ny toetr'andro sy ny volkano, dia ho afaka manatona ny toeram-piantsonana farany ianao, miorina amin'ny haavon'ny 4200 metatra. Azo antoka fa ho hitanao ny fiovan'ny mari-pana sy ny haavony.
Ny torolàlana dia hilaza amintsika raha toa ka mifanaraka tsara amin'ny toe-javatra sy ny halaviran-tsika ny fihanika. Ilaina ny manaraka ny tolo-kevitr'izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Hatramin'io fotoana io dia efa hitantsika ny fialofana avo any an-tendrombohitra, misy 4900 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina ary ao ambadiky ny glacier mametraka fotsiny dia manomboka.
Ny làlana voamarika tsara miaraka amin'ny tehezan-tendrombohitra iray dia hitarika antsika hiakatra amin'ny 600/700 metatra ambiny. Raha ny teoria dia afaka adiny iray na adiny iray sy sasany no tokony hahatongavanao amin'ny fialofana.
Volkano sy malama fotsiny ny tany. Imbetsaka ny dingana roa no raisina hiakatra ary tsy te-hanao izany dia ampidinina telo hafa. Mila manam-paharetana fa tsy mihazakazaka ary mandroso tsikelikely. Zava-dehibe tokoa ny fisotroana rano tsy tapaka ary fanajana ny haavony.
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra, afaka adiny iray dia ho tonga amin'ny fialofana izay ahafahantsika misaintsaina ireo fomba fijery mahavariana (valan-javaboary, lagoons ary sehatra Andean) ary miakatra (Glacier sy vava volkano Cotopaxi). Raha vantany vao eto isika dia afaka mandray fanapahan-kevitra maromaro arakaraka ny fotoana misy, ny toe-batana ary ny toetrandro:
Aza miakatra ary miverina amin'ny toeram-piantsonana.
Miakatra amin'ny fiandohan'ny glacier, miorina amin'ny 5300 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Dia an-tongotra latsaky ny adiny iray ary azo atao izany na mijanona matory any amin'ny fialofana isika na raha miverina amin'ny teboka fanombohana.
Miakatra amin'ny vava volkano. Amin'ity tranga ity dia mila manamarina isika raha afaka miakatra ara-batana ary amin'ny lafiny iray dia mila mandany ny alina ao amin'ny fialofana isika, tsy azo atao ny manao ny zava-drehetra amin'ny andro iray.
Midina sy mitrandraka amin'ny Mountain Bike!
Raha avy nitondra van sy bisikileta izahay, Manoro hevitra tanteraka izahay ny hamerenana ny làlana hiverina avy amin'ny toeram-piantsonana miaraka amin'ny Mountain Bike. Saika 1 ora ny fidinana tsy tapaka avy 4200 metatra hatramin'ny 3500.
Tendrombohitra mahatalanjona, voajanahary amin'ny famirapiratany eny rehetra eny. Fahatsapana fahalalahana sarotra ampifanarahana.
Ny torolàlana dia hampiseho anao ny toerana hamaranana ny fiaviana. Avy any sy amin'ny bisikileta no azonao jerena ny Cotopaxi National Park manontolo. Ny lemaka, ny farihy, ny natiora ary ny tontolo marevaka dia hanjakan'ny diantsika.
Raha vantany vao vita ny fitsidihantsika bisikileta, dia ho tonga ny fotoana hiverenantsika amin'ny fanombohana antsika.
Ho an'ireo tia natiora, ny fiakarana mankany amin'ny volkano Cotopaxi dia fitsangatsanganana an-tsokosoko sy mora azo raha mandeha any Quito isika. Ny Ecuadorian Andes dia mahavariana ary misy làlana ho an'ny tsiro rehetra, saingy ilaina ity iray ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Ekoatera » Ilay volkano Cotopaxi, fitsangantsanganana mahafinaritra avy any Quito
Mandehana fitsangantsanganana amin'ny ony Danube
3 amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any Andalusia